Ministeera Dhimma Alaa: Lammileen 2,250 Saawud Arabiyaarra gara biyyaa deebiifaman - BBC News Afaan Oromoo
Itoophiyaan torban kana keessa qofa lammiileeshee biyya Sawud Arabiyaa Jiddaatti rakkoolee garaa garaa keessa turan 2,250 gara biyyattii akka deebiste, Ministera Dhimma Alaa beeksise.Ministirichatti Dubbii Himaan Obbo Mallas Alam akka jedhanitti, kaayyoon waajira isaanii inni guddaan kabajaafi nageenya lammilee biyyatti eegsiisuudha jedhaniiru.
Akka Obbo Alam himanitti Wiixata irraa kaasee hanga Jimaata boruutti guyyaan namoonni 450 gara biyyaatti akka deebii'an taasifamaa jira. Lammileen biyyoota Itoophiyaa waajjira quntsilaa keessaa qabdu keessa jiraatan haala kanaan fayyadmtoota ni ta'u jedheera.
Lammiilee hanga ammaatti torbee kan gara biyyaatti deebifaman keessaa 900 warra biyyattii keessatti murtiidhaan hidhaman yoo ta'u, 4 ammoo kan hidhaan waggaa 10 olii irratti murtaa'edha jedhan.
Hojii lamiilee gara biyyaatti deebiisu kana raawwachuufis, keessattuu kanneen hidhaarra turan osoo yeroo hidhaasaanii hinxumuriin akka deebii'an gochuuf, motummaan biyyoota kanneenii walii marii taasifameen waliigaltee irra ga'amuun akka ta'e himaniiru.
Kana malees lammilee keessattuu dubartoota yeroo dheeraaf Jiddaa hojjatanii kanfaltii argachuu qaban dhorkaman birriin miiliyoona tokkoofi kuma 600 akka kanfalamuuf taasisuu irratti waajjirri quntsilaa hojjachuu isaa himaniiru.
Haaluma kannanis baatiiwwan muraasa darban qofa keessatti lammileen 40,000 ta'an paasportiifi sanada imalaa akka argatan taasifamuus dabalanii addeessaniiru.
Akkasumas lammilee dahannoo argachuuf jecha lammuummaa biyyoota biraa himataa turanis walta'insas waajjira Immigreshinii waliin taasifameen lammiileen Itoophiyaa gara kuma tokko ta'an fayyadamtoota taasifamu isaanii dubbatu dubbi himaan kun.
Sochii Motummaan Itoophiyaa Afrikaanoonni Itoophiyaa akka biyya saaniitti akka ilaalan taasisuun walqabatee sochii vizaa erga ga'annii ( visa on arrival) keennuu eegalameen, baatii Onkololeessatii kaasee hanga ammaatti lammileen biyyoota miseensa Gamtaa Afrikaa 28,000 viizaan kennameefiira jedhaniiru.